China Zmte nofonosina famokarana fantsom-pifandraisana sy famokarana | Topa
Ferrule Hose Hydraulika
Fitaovana Hydraulika anglisy
Fitaovana hydraulic amerikana
Fomba iray fantsom-pandrosoana
Fitaovana azo ampiasaina amin'ny Hydraulika azo ampiasaina
Fitaovana fantsona hafa
Metric Hydraulica adaptatera
British Hydraulic adaptatera
American Hydraulic adaptatera
Fitaovana PCP Airgun
Fizarana teknolojia mifandraika
Zmte mifono vy mifono vy
Fitaovana: Silety Rubber, PP
Fahaiza-manao: Tady fingotra mahazaka hafanana
Loko: Mainty, Mainty / mena / manga / mavo
Temperature: -30 Hatramin'ny 90 degre
Halavany: 2m / 50m Na Araka ny fangatahanao
Model Model: Diameter samihafa
Tube mety: 8-10 Mm Diameter ivelany
Tube anatiny: Manohitra ny solika
Fampiasana: Arovy ny fantsona
Taratasy fanamarinana: ISO9001: 2008
Anarana: Tube Hydraulika fihenam-bidy
Fonosana: baoritra sy boaty hazo
Famokarana: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Fitaterana: Ranomasina, Tany, Rivotra, DHL / UPS / TNT
Fahaizana manome: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Taratasy fanamarinana: Hydraulika Hose ISO
Seranan-tsambo: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Fihenam-bidy nofonosina Zmte Rohy Hydraulika
Ny fantson-drivotra fihenam-bidy dia ampiasaina amin'ny fanampiana hydraulic hidiko, fitrandrahana solika, mety amin'ny fananganana injeniera, fitaterana vano, fametahana metallurgy, fitaovana fitrandrahana, sambo, milina fanodinana tsindrona, milina fambolena fitaovana isan-karazany.
Fantsom-pifandraisana hydraulic - Hose anatiny
Substratum an'ny fingotra synthetic mahatohitra menaka.
Fantsom-pifandraisana hydraulic - Fanamafisana
Ampakarina 1 misy vy mahery mahatohitra, 2braide ary koa misy fanamafisana tariby efatra-spiral.six
Fantsom-pifandraisana hydraulic - Mandrakotra
Black rubber synthetic mahatohitra ny abrasion, menaka, solika, ozone, atmospheric agents.
avy amin'ny -40 ° C hatramin'ny + 100 ° C
ID ID Tube OD Fanerena miasa Faneriterena Radius Bend farany ambany Lanja
santimetatra MG MG Mpa Psi Mpa Psi MG kg / m
Fantsom-pifandraisana hydraulic hampiasaina hampitana ilay ranon-drivotra toy ny menaka hydraulic, solika solika, lubricating, emulsion rano, hydrocarbon ary zanakalahy mba hitaterana ranon-tsolika avo sy hiditra hiditra ho an'ny tetikasa injeniera izay -40 temperature ~ + 100 ℃.
Ny orinasanay dia manana fitaovana mandroso izay nohafarana avy any Korea Atsimo, Failandy ary Italia, ao anatin'izany ny masinina miolakolaka, masinina mirandrana, milina crimping ary fitaovana famokarana manakiana hafa. Ary koa ny fipetrahana fitsapana, ny fitsapana fanentanana ary ny fitaovana fanandramana hafa.
Mamokatra vokatra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena SAE sy DIN misy kalitao avo lenta izahay. Ny vokatra dia amidy amin'ny sehatra isan-karazany, anisan'izany ny tanimbary, ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany, ny metallurgy, ny injeniera ary ny milina. Nalefa any Amerika, Rosia, Kanada, Arzantina ary firenena maro hafa ny ampahany.
Ny fonosana ankapobeny dfantson-drivotra iscountdia plastika na kitapo misy tenona misy paleta ao ambanin'ny fantsom-pifandraisana, izay hita eto ambany. Izahay kosa afaka manome fonosana manokana arakaraka ny fangatahan'ny mpanjifa.
NY dfantson-drivotra iscount dia novokarina mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly.
1.Ny fampiasana fingotra avo lenta, ny liner anatiny dia miaraka amin'ny tsy fahaizan'ny rivotra tsara, ary ny fonony dia misy fanoherana hafanana sy fanoherana fahanterana.
2.Ny fanamafisana fanamafisana dia natao avy amin'ny kofehy polyester (na kofehy) vita amin'ny kofehy izay manana tanjaka avo.
3.Miorina miasa: -40 ℃ -160 ℃
4. fenitra enjehina: GB / T25
5. Izy io dia tontolo iainana, tsy misy loto amin'ny tontolo iainana.
6.Manana teknolojia Dept,
7. manaiky OEM
8. Azo alaina ohatra sy ny kaomandy
1. Misy ve ny OEM?
Eny, misy OEM. Manana mpamorona matihanina izahay hanampy ny fampiroboroboana ny marika.
2. Misy ve ny santionany?
Eny, misy santionany ho anao hizaha toetra ny kalitao.Raha misy santionany amin'ny trano fitehirizam-bokatra izahay, dia azonao aloany ny entana
3. Mpanamboatra ve ianao?
Mpanamboatra 100%, tongasoa anao mitsidika ny tsipika famokarana.
4. Inona ny fe-potoana fandoavanao vola mahazatra?
T / T 30% toy ny fametrahana, ary T / T 70% mandanjalanja aloa alohan'ny entana.
Na misy fe-potoana fandoavam-bola hiresahana.
Ahoana ny fomba hifandraisana anay?
Mitady mpanamboatra & mpamatsy fantsom-panafody azo antoka Discount? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. Ny selan'ny Zmte Discount Hydraulika rehetra dia azo antoka. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina tamin'ny fantsom-pandrefesana hydraulic Discount. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy vokatra: Tube Hydraulika
Teo aloha: Manometer 300bar 25mm manometer ho an'ny compressor PCP
Manaraka: 16711 Fitaovana fantsom-boaloboka vita amin'ny vy tsy miova
Fampifanarahana fantsom-panafody mpamokatra indostrialy hydraulic
Fantsom-pifandraisana volo fantsom-pirenen-tsolika sy ...
Tsipika solika tsindry avo fantsom-pifandraisana hydraulic ...
Stainless vy malefaka tsindry avo hydrauli ...
Fantsona fingotra amboninà malefaka avo lenta
Fantsona fantsom-pifandraisana hydraulic azo ovaina avo lenta